I-Gestosis yisifo esenzeka kuphela kubafazi abakhulelweyo. Oku kuyinkxalabo enzulu yenkqubo evamile yokukhulelwa, leyo, ngokutsho kweenani ezibuhlungu, enye yezona zizathu eziqhelekileyo zokufa kwabantwana. Njengomthetho, i-gestosis iqala ngexesha lokuthoba kweeveki ezingama-16 ukuya kwe-20, kodwa ubunzima bonke bukho kwiinkqubo zokungaboni ukuba oogqirha bonyango, ngoko ke, i-gestosis ifunyenwe kuphela kwixesha elingaphezu kweeveki ezingama-28. Eli nqaku liza kukuxelela malunga nokunyangwa kwegestosis ekhaya.
Ukubonakala kwe-preeclampsia ngenxa yezizathu ezininzi. Inyaniso yokuba emzimbeni wesifazane okhulelwe ngekhosi yokukhulelwa kunye nokuphuhliswa kwefesibhi iyatshintsha rhoqo, kuquka ukuthembeka kweendonga zeemithwalo yegazi. Ngoko ke, iiprotheyini zamanzi kunye neeplasma zigcinwa emzimbeni, zenza i-edema.
Xa i-gestosis ikwaphulwa ngokungenakupheka komsebenzi weezintso, xa iintso zingabhekana nomsebenzi wazo. Kwi-urine, inani leprotheyini landa, kwaye ukuba akukho nto isetyenziswa ngexesha elifanelekileyo, ukungaphumeleli kwe-renal ekhoyo kunokwenzeka. Yingakho enye yeemvavanyo ezinyanzelisayo ekukhulelweni kuhlalutyo lomchamo, olwenziwe ngosuku oluzayo kwiveki nganye. Ukongezelela, kuyimfuneko ukulinganisela, ukugcina ubunzima phantsi kolawulo, kuba ukwanda okweqile kwesisindo nenye yeempawu zokuvuvukala okufihliweyo.
Ngexesha elifanayo, ugqirha oya kuhlala ulawulwa ngumxinzelelo wegazi lomfazi okhulelweyo, kuba uxinzelelo lwegazi oluphezulu luchukumisa ama-blood clots kwiinqanawa, kunye ne-spasm yeemithwalo yegazi, kuquka nemithambo yegazi edla i-placenta-kwaye oku kuyingozi kwimeko yomama nomntwana.
I-Gestosis idinga unyango ngokukhawuleza kunye nokubeka esweni rhoqo iingcali.
Kwizigaba zokuqala, unyango olungelona unyango lwegestosis, i-physiotherapy, ulawulo lokusela, utywala, unyango olunokwenzeka kunye nemifuno ekhaya.
Esiqingatha sokuqala sokukhulelwa ukukhusela i-gestosis, iirhafu ezilandelayo zicetyiswayo (ukubonisana kwangaphambili kunye noogqirha oya kubakho unyanzelekile!):
Ukuqokelela kweentyatyambo ze-linden kunye ne-calendula, ukutshintshana kunye ne-mint, iqela le-spray-yonke inani elinganayo.
Ukuqokelela kweentyatyambo zeentyantyambo ze-geranium kunye ne-immortelle, amaphepha ama-blueberries kunye nama-raspberries, iziqhenko - zonke zilinganayo.
Umxube weengcambu zeminwe kunye ne-motherwort, amaqabunga e-birch, i-kipreya, kunye nokongezwa kwembewu yefelk - yonke inxalenye elinganayo.
Umxube wezintambo ze-rose kunye ne-hawthorn kunye nentsimbi yengca kunye nonina-kunye nomama-wesibini-konke okulinganayo.
Umxube weengcambu ze-chicory, amashidi e-spray, birch kunye ne-bilberry, kunye nokongezwa kwintsimbi yengca kunye nesithelo se-rowan - zonke ziyingxenye ezilinganayo.
Umxube weentyantyambo ze-marigold kunye ne-linden, i-ingintsi, iinqabana, amaqabunga omama-kunye nomama-wesibini - zonke zilinganayo.
Umxube weentyantyambo ze-marigold kunye ne-immortelle, imbewu yefelk, amaqabunga e-birch, i-currants kunye nama-raspberries onke anesabelo esilinganayo.
Umxube wamagqabi omama nonina, i-kapreya kunye nama-raspberries, imbewu ye-fox, amajikijolo e-hawthorn, iintyatyambo ze-linden kunye ne-geraniums zilinganayo.
Umxube weengcambu zenye indawo kunye ne-mint, isisindo se-rose kunye nompu oqhelekileyo weentaba, i-calendula iintyatyambo, amaqabunga e-blueberry kunye ne-currant nazo zonke zilinganayo.
Unokukhetha enye yemirhumo, kwaye uyithathe ngexesha lokukhulelwa kwakho.
Kwisiqingatha sesibini sokukhulelwa ukukhusela i-gestosis, kuxhomekeke kwimpilo eqhelekileyo, emva kokubonisana nogqirha, unokuthatha oku kulungiselelwe okulandelayo:
Ukuqokelela iintyatyambo ze-marigold kunye ne-lime, iinqumlo, i-viburnum kunye ne-hawthorn, amaqabunga e-birch, i-blueberry kunye ne-plantain-zonke zizabelo ezilinganayo.
Umxube weengca ze-herbaceous, i-geraniums, i-horsetail yintsimi, imifuno ye-veronica, amaqabunga e-raspberry, immortelle iintyatyambo, imbewu yefelk - zonke ziyingxenye ezilinganayo.
Umxube wamagqabi omama nonina, i-kapreya, i-birch, ingcambu yengca, utshani lwe-astragalus kunye ne-mint, iintyatyambo ze-Mullein zilinganayo.
Umxube wamaqabunga ama-cranberries kunye ne-plantain, iziqhamo ze-ash ash, i-mint kunye ne-motherwort herbs, iintyatyambo ze-mulberry, ingcambu ye-burdock kunye ne-burdock ingcambu zonke zilinganayo.
Umxube wamaqabunga oomama nonina, iintyatyambo ze-linden kunye ne-calendula, itiye yeKuril, ingca yengqungquthela-yonke into elinganayo.
Umxube weengcambu zegolide kunye neentyantyambo, iintyatyambo ze-immortelle, iziqhenqa kunye namaqabunga e-raspberry - onke ayingxenye elinganayo.
Umxube wamaqabunga e-currant, i-blueberries kunye ne-spray, ingca ye-horsetail kunye ne-mint, iindile ze-mullein kunye neengcambu ze-chicory-zonke zilinganayo.
Umxube wamaqabunga e-motherwort, ukutshintsha kunye ne-geraniums, izityalo zeVeronica, amaqabunga e-birch, amaqabunga ezitshalo, iziqhamo ze-viburnum-zonke ziyingxenye ezilinganayo.
Umxube weentyatyambo ze-mulberry, amaqabunga e-birch kunye ne-blueberry, iziqhenko - zonke ezilinganayo.
Umxube weefleks, imbewu yengca, amaqabunga e-plantain, ingcambu ye-burdock, ingca ye-burdock - yonke inxalenye elinganayo.
Indlela yokulungelelanisa zonke iirhafu ezi ngasentla zilandelayo: iitrob zithintela kwi-grinder yenyama okanye i-grinder. Ngomthamo omncinci, uthele iithayitha yamanzi abilayo kunye neepunipoli ezi-2 zeqoqo eligciniweyo, ezilethwe emathunjini kwaye ubiliswe imizuzu eyi-10. Emva koko umxube uthululwa kwi-thermos kwaye unxininise ubusuku bonke, ungayi kucoca.
Kufuneka uthathe i-150 ml, isiqingatha seyure ngaphambi kokutya, unokukwazi ukudibanisa ushukela, u-honey, jam. Inkqubo yokonyango malunga neveki ezingama-2-3, ngaphambi kokuba kuphuculwe.
Ekugqibeleni, kufuneka kuphawulwe ukuba nayiphi na unyango ekhaya kufuneka kuvunyelwane nodokotela oya kwi-consulting women.
Ukucoca isibindi: konke okufuneka ukwazi
Kunokuba umsila omnyama uncedo
Impawu ezinobomi zama-alimondi
Ukunyangwa kwabantu besifo somkhuhlane, ukukhwehlela, umphimbo, impumlo, i-bronchitis
Ukuba umntu ugwema ukunxibelelana nomfazi
Ukuxolela ngeCawa 2016. Indlela yokucela ukuxolelwa nokuvuyiswa kwiholide yama-Orthodox
I-Horoscope ngo-Oktobha 2017 - amawele amabhinqa-uTamara Globa no-Angela Pearl
Izilungiso zomntu zokuphucula umbono
Vareniki ivila ngeejikijolo